RAGGA: 6 Ammaan Oo Gacalisadaada Ay U Baahi Qabto | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»RAGGA: 6 Ammaan Oo Gacalisadaada Ay U Baahi Qabto
Gabar kasta waxay rabtaa inay ammaan joogta ah ka hesho ninkeeda. Markaad si joogto ah u ammaanto gacalisada noloshaada waxaad dareensiisay kalgacayl iyo farxad qurux badan.
Waa kuwaan 6 ammaan oo xiriirka ka dhigaya mid aanan liicin.
Waan jeclahay inaan dhinaceyga kugu heysto
Mar walba usheeg inaad jeceshahay inay dhinacaaga joogto. Ha joojin inaad usheegtid inaad jeceshahay inaad dhinacaaga ku heysatid, waxaa sidoo kale muhiim ah inaad meelaha qaar uwaddo sababtoo ah inaad sidaas u sameysid waxay tuseysaa inaad ku faraxsantahay isla markaana aad jeceshahay inay barbarkaaga joogto.
Dharkaas waaku qurxantahay
Waxay rabtaa inay ogaato inaad ka heshay dareeskeeda. Marnaba haka hilmaamin inaad u sheegtid sida ay ugu qurxantahay dharkaas.
Ma jirto haweeneey ka daasha maqalka ereyga “waanku jeclahay”. Hubi inaad usheegto inaad jeceshahay maalin walba sababtoo ah maqalka ereyadaas waxay dib u xaqiijiyaan jacaylka aad u qabtid xaajiyadda.
Waxaa tahay haweeneyda dunida ugu quruxda badan
Goormee ayuu ahaa waqtigii ugu dambeeyay ee aad usheegtay inay tahay haweeneyda adduunka ugu quruxda badan? Haweeney kasta ayaa jecel taas marka uu ninkeeda u arko inat tahay haweeneyda dunida ugu quruxda badan.
Waxaa tahay saaxiibka iigu wanaagsan
Waxay rabtaa inaad u aragto inay tahay saaxiibka kuugu wanaagsan sidaa darteed usheegitaanka inay tahay saaxiibka kuugu wanaagsan waa ammaan ay kaa rabto. Waa inaad u caddeysaa inay tahay saaxiibka kuugu wanaagsan adigoo u qiraya, kuna faraxsan wehelka ay kuu tahay isla markaana ku kalsoon.
Waanku faraxsanahay inaan nolosha kugu heysto
Had iyo jeer usheeg haweeneyda noloshaada ah inaad dareemeysid farxad ku saabsan helitaankeeda. Tani waa ammaan ay u xiisaan haweenka badankooda isla markaana ay aad u jecelyihiin. Waxay dooneysaa inay ogaato inaad ku faraxsantahay inaad nolosha aad ku heysato.
5 Siyaabood Oo Wanaagsan Oo Aad Ku Raali Gelin Karto Lamaantaada/Lamaankaaga